Toogasho ka dhacday Degmada Norrköping oo Qof ku dhaawacmay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaToogasho ka dhacday Degmada Norrköping oo Qof ku dhaawacmay
Toogasho ka dhacday Degmada Norrköping oo Qof ku dhaawacmay
September 16, 2020 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Booliska ayaa baaraya toogasho ka dhacday Klockartorpet oo ku taal Norrköping.
Dhowr qof oo maqlay rasaasta ayaa ku wargaligay booliska waxyar ka dib 10.30 pm fiidnimadii Talaadada. Nin dhaawacmay oo 25 jir ah ayaa la dhigay isbitaalka, booliiskuna waxay rumeysan yihiin in la toogtay.
– Waxaan bilownay baaritaan hordhac ah oo ku saabsan isku day dil. Waxaan isku dayeynaa inaan ogaanno waxa dhacay, ayay Monica Bergström, afhayeenka saxaafadda ee booliska u sheegtay TT.
Goobta fal dambiyeedku ka dhacay ayaa la xidhay booliska ayaana baaritaan ka sameeyay. iyagoo la kulmay dadka goobta ka agdhawaa iyo kuwa daganaa nawaaxiga.
wararka la helayo maanta galinka hore ayaa sheegaya in wali aanan qofna loo qaban falkaasi dhacay.